Maninona raha hampifanarahana eo an-toerana ny resaka teknolojia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2018 8:26 GMT
Localization Sprint miaraka amin'i Jaqi Aru sy ny ekipa momba ny teny Aymara ao El Alto, Bolivia. Sary avy amin'ny Localization Lab. Nahazoana alalana.
Mamerina mamoaka lahatsoratra avy amin'ireo mpandray anjara amin'ny Localization Lab noho ny fiarahamiasa ny Rising Voices. Ny lahatsoratra orizinaly dia azo jerena ao amin'ny pejy Medium an'izy ireo.
Manomboka amin'ny WhatsApp hatramin'ny Instagram, nitondra zava-baovao mahaliana ny fivoaran'ny teknolojia. Na dia izany aza, niteraka ilay nomena anarana hoe “hantsana nomerika” ny toetry ny teknolojia tsy mitsaha-mivoatra.
Ao amin'ny firenena kely fidiram-bola tahaka ny ahy (Zimbaboe), ireo mpandraharaha tambajotra finday tsy miankina sy ireo mpamatsy tolotra aterineto no tena mpampandeha ny fidirana amin'ny aterineto ao amin'ny firenena. Noho ny halafosan'ny fiainana sy ny halafosan'ny start-up goavana amin'ny fametrahana foto-drafitrasa, lafo kokoa amin'ny ankapobeny ny fidirana aterineto eto Zimbaboe tsy toy ny aty amin'ny faritra amin'ny ankapobeny — ka mitarika sakana lehibe amin'ny fanavaozana nomerika. Raha nisy ny ezaka natao handresena lahatra ny governemanta sy hampiroborobo ny fizarana foto-drafitrasa mba hampihenana ny vidin'ny fidirana aterineto ao Zimbaboe, hita fa lava sy mihisatra ny dingana. Toa mbola lavitra ny drafitra fizarana fotodrafitrasa azo atao izay ahitana ireo mpiantsehatra manana fitaovana maro kokoa azo ekena hampihenana ny vidiny.
Saingy ny zavamisy na dia mora aza ny fidirana aterineto, hamaha ny olan'ny hantsana nomerika tokoa ve izany? Angamba tsia, miankina amin'ireo mpandika teny an-tsitrapo sy ny asa ataon'izy ireo mba hamantarana ireo fitaovana fihodidinana eo amin'ny sehatra ara-teknolojia no anisan'ny vahaolana.
Amin'ny maha-olona avy amin'ny ampahan'izao tontolo izao fantara amin'ny faritra sasany ho “The Global South”, heverina fa fiteny vitsy an'isa ny tenin-drazako: ny Shona. Noho izany antony izany, tsy tena zava-dehibe izy amin'ny “resaka sakafo” raha toa ka misafidy izay teny hita antserasera. Ao Zimbaboe, midika ny fanamby ara-toekarena fa niara-niala nankany amin'ireo kaontinanta isan-karazany ireo fianakaviana.
Soa ihany, nanamora ny fifandraisana amin'ny fianakaviana ny fandrosoan'ny teknolojia, saingy midika koa izany fa ny ankamaroan'ny fifandraisana dia amin'ny alalan'ny soratra indrindra koa (toy ny Instant Messengers, media sosialy, mailaka sns…). Ho an'ireo olona manana fitenin-drazana izay ankoatra ny teny Anglisy (na fiteny hafa “maro an'isa”), misy ny ezaka lehibe tsy maintsy natao mba hifandraisana amin'ny fampiharana — zavatra izay mametraka sakana ho an'ny maro. Tsy namolavola teny vaovao nandritra ny fotoana ela ny firenena tahaka ny ahy ary midika izany fa ny fampiasana ao an-toerana ny teny toy ny WiFi, fanafenan-tsoratra, sy interface (ankoatra ny teny ara-teknika hafa) dia tsy misy ara-virtoaly amin'ny fiteninay. Raha hiditra any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana ny teknolojia sy ny aterineto, zava-dehibe ny mahatakatra fa ho tanteraka ny teknolojia rehefa hita taratra amin'ny fitaovana antenaintsika hampiasaina ny kolontsaina sy ny fiteny eo an-toerana.
Localization Sprint miaraka amin'ireo mpandray anjara amin'ny fiteny Swahili. Sary avy amin'i Zaituni Njovu. Nahazoana alalana.
Ny asan'ny Localization Lab dia fahafahana mamorona torohay amin'ny fiteny eo an-toerana ho an'ny fiarahamonina izay tena mila torohay. Na dia ny fandikana ny fampiharana ho an'ny teknolojian'ny fihodidinana aza no tena andraikitra voalohan'ny Localization Lab, ity sehatra ity dia varavarana misokatra iray ho an'ireo mpandika teny an-tsitrapo tahaka ahy mba hitondrana fanovana amin'ny fiantohana fa, ao anatin'ny tontolo miovaova hatrany, izay miompana hatrany amin'ny teknolojia, ho velona ny fiteniko, mitohy mandray anjara ary tsy manjavona. Ireo hetsika fandikan-teny ifarimbonana isan-taona sy manokana any amin'ny firenena manokana — na Localization Sprints — no singa mandrafitra izay nanampy nanome endrika ny fahitako ny vaovao amin'ny aterineto izay jerena sy ampiasain'ireo olom-pirenena ao amin'ny firenena niaviako. Ny Sprints ihany koa no nahafahako nahita fa tsy foana ireo fanamby mifandraika amin'ny fiteny, ny zava-misy ary ny ezaka hampihena ny hantsana.
Ny asa atao eto dia ahafahana miaro ny votoaty, ny fahaiza-mamaky teny nomerika ary ireo olona rehetra miasa amin'ny sehatra fikatrohana aterineto mba hiasana amin'ny fanomezana fitaovana ho an'ny fiarahamonina ao an-toerana amin'ny fahaizana mahay mamaky teny nomerika amin'ny fiteny mahazatra sy ahitana toe-javatra azo ifandraisana aminy. Amin'ny maha mpampiofana momba ny fiarovana votoaty ao Zimbaboe, tena lehibe ity lafiny satria matetika isika ao anatin'ny efitra feno olona izay tsy manana fahalalana na manana fa kely momba ny hevitra fototry ny aterineto sy ny teknika fiarovana nomerika manokana. Amin'ireo fampiofanana tsirairay tsy maintsy nakako volontany, niovàna sy nilalaovana mba ho mety amin'ny vondrona, mahatsapa mafy aho fa isika amin'ny maha mpampiofana dia mila manana fampiharana sy torohay amin'ny fitenin-drazantsika. Afaka tanterahana izany raha misy ny olona miasa mandika teny ny torohay na ny fampiharana.
Amin'ny alalan'ny Localization Lab, manomboka maka endrika ny resaka lehibe indrindra manodidina ny fampandrosoana ny fiteny, ary noho izany, ao amin'ny fireneko miendrika kafetiera, no fanombohan'ny dia 1 000 maily.
Koa ilaozako amin'ity hevitro ity ianareo:
Teboka fanombohana ny fandikan-teny. Fanombohana izay miantoka ny tenin-drazako hijanona hisongadina, fanombohana mba hampifandray ny hantsana nomerika ateraky ny fiteny sy ny hevitra, ary eny tokoa, fanombohana mba hamoahana ny fahaiza-manaon'ireo lehilahy sy vehivavy mpiray tanindrazana amiko. Raha ny marina, manomboka amin'ny asa an-tsitrapo handika fampiharana izany rehetra izany……